2 Samoela 8 - Ny Baiboly
2 Samoela toko 8
Ady sy fandresen'i Davida - Ny lohandohan'ny manamboninahiny.
1Taorian'izany dia nandresy ny Filistina Davida ka nampietry azy ireo, sy nanesotra ny fitondrana ny renivohitr'izy ireo teo an-tànany.
2Nandresy ny Moabita koa izy, ary nampandriny tamin'ny tany ireo, dia norefesiny tamin'ny kofehy, ka nandrefy indroan'ny kofehy izy, novonoiny ny eran'ny kofehy, novelominy ny eran'ny kofehy. Dia tonga mpanompon'i Davida ny Moabita, ka nanatitra hena ho azy.
3Teny an-dàlana, fony izy ndeha hampody ny fanjakany eo amoron'ny ony Eofrata, dia resin'i Davida koa Hadadezera zana-dRohoba, mpanjakan'i Sobà. 4Ary miaramila an-tsoavaly fiton-jato amby arivo, miaramila an-tongotra roa alina, no nosamborin'i Davida taminy; ny soavalin-kalesy notraingoin'i Davida avokoa, fa ny mpitarika kalesy zato sisa no notanany. 5Tonga namonjy an'i Hadadezera mpanjakan'i Sobà koa ny Siriana avy any Damasa, ka noresen'i Davida ny roa alina tamin'ny Siriana. 6Nametrahan'i Davida miaramila mponina i Sirian'i Damasa, ka tonga mpanompon'i Davida nanatitra hetra ny Siriana. Nomen'ny Tompo an'i Davida ny fandresena, tany amin'izay rehetra nalehany. 7Nalain'i Davida ny ampinga volamena tao amin'ny mpanompon'i Hadadezera ka nentiny nankany Jerosalema; 8varahina be dia be koa no azon'i Davida mpanjaka, tao Bete sy Berota, tanànan'i Hadadezera.
9Nony ren'i Taohò mpanjakan'i Hamata, fa hoe resin'i Davida avokoa ny miaramilan'i Hadadezera, 10dia nirahin'i Taohò ho any amin'i Davida mpanjaka, Jorama zanany, hamangy sy hiarahaba azy, noho ny niadiany sy nandreseny an'i Hadadezera, fa niady lava tamin'i Hadadezera Taohò. Kapoaka volamena sy kapoaka volafotsy ary kapoaka varahina no teo an-tànan'i Jorama. 11Natokan'i Davida mpanjaka ho an'ny Tompo koa izany, toraky ny nanokanany ny volafotsy sy volamena azony tamin'ny firenena rehetra nohitsahin'ny tongony, 12dia Siria, Moaba, ny taranak'i Amona, ny Filistina, Amaleka; ary ny avy tamin'ny babo azony tamin'i Hadadezera zanak'i Rohoba, mpanjakan'i Sobà.
13Nahazo laza Davida fony izy niverina avy nandresy ny Siriana valo arivo sy iray alina, teo amin'ny Lohasahan-tSira. 14Nametrahany miaramila mponina tao Edoma, namehatrany miaramila avokoa Edoma tontolo, ka dia tonga mpanompon'i Davida avokoa Edoma rehetra. Nomen'ny Tompo an'i Davida ny fandresena, tany amin'izay rehetra nalehany.
15Nanjaka tamin'Israely rehetra Davida, ary nitondra ny vahoakany rehetra araka ny rariny sy ny fahamarinana. 16Joaba, zanak'i Sarvia, no nifehy ny miaramila; Josafata zanak'i Ahiloda, no mpitahiry ny bokim-panjakana; 17Sadaoka zanak'i Akitoba sy Akimeleka, zanak'i Abiatara, no mpisorona; Saraiasa no mpanoratra; 18Banaiasa zanak'i Joiadà, no lehiben'ny Keretiana sy ny Feletiana; ary ny zanak'i Davida no mpanolo-tsaina manolotra azy indrindra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0685 seconds